Maalinta: Sebtember 8, 2018
Buuruhu waxay u beddelaan Kaluumeyaal Dheeraad ah
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınJoornaalka Raillife ayaa daabacay maqaal cusub bishii Sebtember. Maqaalka Apaydın ee cinwaan looga dhigay “Buuraha ayaa isu beddelaya dhul xawaare sare leh oo la daabacay. QODOBADA APAYDIN ​​dört Afar xilli oo isku waqti ah [More ...]
Qoraalkii bishii Sebtember ee joornaalka Raillife, Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha "3. Gegada diyaaradaha waxay qiimo u yeeli doontaa dalkeena ”. Waa kan warqaddii Wasiirka TURHAN Yeni Istanbul Airport Airport cusub ee maalmaha furitaanka la tiriyay. [More ...]
Shirkadda SAMULAŞ 'Tramway Accident Exploration
Samsun 10.50'de Kılıçdede ST station 77-sano jir ST ayaa ku dhacay taraamka. Qofka taraamka hoostiisa maraakiibta dabku ka kacaan waxaa laga saarayaa isbitaalka ambalaas. Samsun oo la xidhiidha shilka [More ...]
Xiriirka gaadiidka Bursaray 3 ayaa laga dhimi doonaa daqiiqad illaa daqiiqo
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktas, oo ah dhaawaca dhiigbaxa ee magaalada, oo ay ku jiraan gaadiidka, dhammaan dhibaatooyinka ayaa la waayay maalinba maalinta ka dambaysa, isaga oo sheegay in adeegga metro laga bilaabo daqiiqadaha 3 illaa 2.5 daqiiqado. [More ...]
Magaca Airport-ka cusub ee Istanbul ayaa lagu dhawaaqi doonaa xafladdii furitaanka!
mashaariicda ahee Turkey ee dalka oo dhan ka adkaan doonaa warshadaha iyo fasalka aerospace our ku yaalla Istanbul 3. Xisaabinta furitaanka garoonka diyaaradaha ayaa la bilaabay. Gegada diyaaradaha ee cusub ee magaalada Istanbul 29 Oktoobar 2018 [More ...]
Deynta Nadiifinta ee Baadhaada iyo Culeyska
Iyada oo ay sabab u tahay jilicsanaanta nadiifinta duurka iyo qabanqaabada buundooyinka iyo isku xirka u dhexeeya Adana iyo Mersin, Waddada Tareenka ee Gobolka 6. Agaasime Goboleed (TCDD) ayaa xaddidaya qiimaha 2018 / 401459 GCC 336.721,54 TL [More ...]
sano xnumx'l ilaa waxaa jiray qaar ka mid ah oo kaliya baabuurta Yurub, baabuurta American iyo Turkey. Laakiin waxaa dalka ka jiray isbadal lacageed. Gawaarida la soo dejiyay iyo alaabada kale ee loo baahan yahay gawaaridaan [More ...]
Turkiga ugu horeeyay ee wax soosaarka alaabada gudaha
Taxanaha soo saaray Car xnumx.türkiye gudaha ugu horeysay: ANADOL caan ku ah inuu xiiseynayo inuu baabuurta Vehbi Koc, mid ka mid ah ciyaartoyda diirada u of Turkey ahayd in la soo saaro baabuur u gaar ah. In sano 1 ku Company Motor Ford ayaa loo doortay iyo wakiilka Turkiga [More ...]
120 Thousand People Looga Badbaadiyay Cimilada habeenkii ee Antalya Qof 9 wuxuu beddelaa taraafikada Winter ee bisha September
120 kun oo muwaadiniin ah ayaa ka faa'iidaystay duullimaadyada habeenkii ee ay bilaabeen Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya bishii Maajo si ay u bixiso gaadiidka dadweynaha ee aan kala go 'lahayn ee magaalada gudaheeda. Xilliga jiilaalka, jadwalka jiilaalka waxaa loo gudbin doonaa 9 Sebtember Axada. Shabakada gaadiidka [More ...]
Marka loo eego Bursa, oo si dhakhso leh u koraysa, oo aan la xakamaynaynin oo aan loo sii qorsheysanayn, gaadiidku wuxuu yimaadaa dhibaato kasta. Intaa waxaa dheer, marka laga soo tago dhibaatada taraafikada ee ka jirta waddooyinka, waxaa loo baahan yahay horumarinta mashruuc joogto ah oo loogu talagalay gaadiidka dadweynaha. Muddadii ugu dambeysay, önemli mashariic muhiim ah oo metro ayaa la keenay oo loogu talagalay gaadiidka dadweynaha. Tusaale ahaan, Moolka Laydhka ah waxaa in badan laga hadlay wadada Emirsultan-Green-Sculpture-Altıparmak-Çekirge-Acemler [More ...]
Laga soo bilaabo Gudoomiyaha Türel ilaa Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka
Antalya, darawalada gaadiidka dadweynaha oo mahadcelin badan ka helay muwaadiniinta oo naftooda ku badbaadiyey geesinimadooda waxaa ku abaalmariyay dowladda hoose ee Antalya iyo golaha farshaxanka iyo farshaxanada iyo basaska. Darawallada muunad ayaa kaaga mahadcelinaya meelahii Madaxweyne Türel [More ...]